Ụdị Estrone nke ukwu (53-16-7) hplc ma99% | AASraw Nwa nwanyi Hormones
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estrone ntụ ntụ
SKU: 53-16-7. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Estrone ntụ (53-16-7), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Estrone (E1) bụ hormone dị oké njọ na-enye onyinye na ụmụ nwanyị BGB na postmenopausal na ụmụ nwoke, kwa. Ọ bụ obi na ụbụrụ na-echebe. Estrogen bụ hormone nke na - akpali ma ọ bụ na - achịkwa mmepe na mmezi nke ụmụ nwanyị na - enwe mmekọahụ na - ejide n'aka ndị na - anabata estrogen.
Raw Estrone ntụ ntụ isi Characters
aha: Estrone ntụ ntụ
Ọbara arọ: 270.37
Raw Estrone ntụ ntụ eji
A maara Estrone dịka E1, oestrone, Folliculin, OESTRONE, Theelin, Estrovarin.
Raw Estrone ntụ ntụ Usage
Estrone dị na usoro ndị a:
Ụrọ Ngwakọta nke Estrone
Ịdọ aka ná ntị na ụrọ Estrone ntụ ntụ
A maara Estrone na ọ bụ carcinogen maka ụmụ nwanyị na-akpata obi nro ma ọ bụ ihe mgbu, ọgbụgbọ, isi ọwụwa, ọbara mgbali, na oghere ụkwụ. N'ime ụmụ nwoke, a maara nke ọma na etrone na-akpata ihe nhụjuanya, ọgbụgbọ, vomiting, na erectile adịghị arụ ọrụ.
Ụdị estrogen nke a na-emepụta n'oge menopause. A na-emepụta ya n'ime imeju imeju na abụba. Ebe ọ bụ na a na-echekwa nsị dịka xenoestrogens, metal dị arọ, na mmiri ndị ọzọ na-emetụta ụbụrụ horlọnụ na akwara imeju na abụba, ndị nwere oke nrịanwụ na-agbanwe agbanwe ma merụọ ụdị estrone.
Esi Nsicha Na-edozi
Raw Estrone ntụ ntụ Marketing
Esi zuta Estrone ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 99% Estrone raw ntụ ntụ dịka ọnyá pro-cancer maka izere ọnụ.
Ntụziaka dị na Pasrone Powder
1 nyochaa maka Estrone ntụ ntụ
Estrone ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi